Ganacso, Xoogso Dhibco
Ku guulayso Qadaadiic Dahab ah
Gal Dhaqaaqa Dahabka
Kusoo dhawoow Dhaqaaqa Dahabka!
Gal Dahabka Dhaqaaqaya Si aad fursad ugu hesho inaad ku guulaysato Qadaadiic Dahab ah.
Ganacsiga Biro tiro yar oo Qiimo leh.
100 Qadaadiic Dahab ah.
Sideed u guulaysan kartaa:
1. Ka ganacso Dahabka,
Qalin ama Platinum
2. Ururso dhibco.
3. Ku Guulayso Qadaadiic Dahab ah!
GAL DAHABKA DHAQAAQAYA
Biraha Qaaliga ah ee Ganacsiga loogu talagalay
fursad lagu guuleysto qadaadiicda Dahabka ah.
Lasoco waxqabadkaaga oo ka dhig dusha sare. Helitaanka dahabku
wuxuu leeyahay waligood ma fududaan.
Xiliga uu dahabku dhaqaaqayo:
Febraayo 22 , 2021 ilaa Maech 23 keeda, 2021.
Copyright© 2021 SUUQYADA FXPRIMUS. Dhamaan Xuquuqaha la dhawray.
Tartanka Dahabka ah ee Dahabka T & Cs
Tartankan Gold Rush wuxuu u furan yahay Macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira oo leh Shakhsi Live ah, Wadajir, Corporate ECN ama koonto ganacsi oo is-bedbeddela oo leh Primus Markets INTL Limited (oo hadda ah "Shirkadda"). Tartanka Dahabka Rush-ka Shirkaddu waxay ku siineysaa guuleystayaasha qadaadiic dhab ah oo Dahab ah, iyadoo la raacayo Shuruudaha iyo Xaaladaha hoose.
Tartankani wuxuu bilaabmayaa 22-ka Febraayo 2021-ka wuxuuna dhammaanayaa 23-ka Maarso 2021 (wixii ka dambeeya 'Muddada Tartanka').
Dhamaan macaamiisha ku haboon waxay si atomaatik ah u gali doonaan tartanka Dahabka Dhaqaaqaya.
Tartanka Dahabka Dhaqaaqaya waxa la siinayaa macamiisha hore ugu jirtay iyo kuwa cusub kuwaas oo horeba u Furtay akoon shaqsiyaad toos ah, isku dar, ama akoon ganacsi oo ECN ama Ku isbad badalaya.
Akoonada macaamiisha waa la maamulaya iyadoo uu maamulayo maamulo akoono badan (MAM) ama akoon PAMM ah, si uu uga qayb qaato tartanka Dahabka Soconaya, macmiilku waa inuu isdiwaangaliyaa oo uu furtaa akoon ganacsi oo cusub agaasin iskii ahna leh. MAM, PAMM iyo akoonada yar yar kuma haboona tartanka Dahabka Soconaya.
Tartankan Dahabka Dhaqaaqaya KUMA haboona dalalka OFAC.
Dhamaan kabka iyo lacagaha akoonada ku salaysan way ku haboonyihin tartanka Dahabka Dhaqaaqaya.
Tartanka Dahabka Dhaqaaqaya kuma xadidna calaa akoon ama calaa macmiil, si kastaba ha ahaatee abaalmarintu waxay ku salaysnaan doontaa akoonada sida shaqsiga ah loogu ganacsado ee aan laysku darin. Macmiilka leh Akoono badan; akoonkasta waxa loo tixgalin doonaa mid gaar ah.
Tartanka Dahabka Dhaqaaqaya waxa lagu kala baxayaa dhibco.
Ganacsi kasta oo lot ah laguna ganacsaday Dahab ( oo muujinaya calaamada 'XAUUSD' ama 'XAUUSD' goobta Ganacsiga ee MT4) waxaad xoogsan doontaa 1 dhibic
Ganacsi kasta oo lot ah laguna ganacsaday Silver ( oo muujinaya calaamada 'XAGUSD' ama 'XAGUSD' Goobta ganacsiga ee MT4) waxaad xoogsan doontaa 2 dhibic
Ganacsi kasta oo lot ah laguna ganacsaday Platinum ( oo muujinaya calaamada 'XPTUSD' ama 'XPTUSD' Goobta ganacsiga ee MT4) waxaad xoogsan doontaa 3 dhibic
FXPRIMUS waxay daabici doontaa akoonada u sareeya, siday u kala sareeyaan, ka dhibcaha ugu badan helay Intii uu socday tartanku iyadoo lagu salayno hab maalinle ah.
Dhamaadka tartanka Dahabka Dhaqaaqaya, shirkadu waxay habayn doontaa inay dirto abaalmarinaha qadaadiicda dahabka ah 20 ugu sareeya (taasoo muujinaysa kuwa ugu sareeya xaga dhibcaha). Macmiil kastaa kaasoo leh akoonadan wuxuu heli doonaa qadaadiic Dahab ah oo ah 0.1 oownsis. Macmiilka haysta wax kabadan hal akoon Oo guulayste ahi wuxu ku haboonyahay inuu helo tartanka Dahabka Dhaqaaqaya.
Ma jiro wax lacag ku shubasho ah oo ugu yaraan layska rabo.
Waxa jira shuruudaha dhibcaha ugu yar ee layska rabo waa 75 Dahabka, Qalinka ama Platinum kaba ( ama isku darkooda), oo lagu xisaabiyay Qaybtiiba 7, si loogu ganacsado wakhtiga isku darka, si macamiishu ay u Noqdaan kuwo ku haboon abaalmarinta tartanka Dhaqaaqa Dahabka.
Shirkadu kaliya waxay abaalmarinaysaa 20 ugu sareeya kuwaasoo gaadhay dhibcaha ugu yar ee layska rabo oo ah 75 dhibcood sida qaybta ka saraysa 11. Waa in aanay ka yaraan 20 macmiil cida dhaafaysa dhibcaha ugu yar ee layska rabo, shirkadu waxay kor u qaadaysaa abaalmarinta haday ka yaraato (20 guulayste) lambarka macaamiisha. Wixii ka badan 20 macmiil ee ka wanaagsan waxa ugu yar, 20 ka hore siday u kala sareyaan ayaa Loo abaamarin doonaa.
Abaalmarinta looma badali karo lacag cadaan ah.
Halka aanay suuro gal ahayn in loo diro abaalmarinta, Shirkadu waxay samaynaysa in wax u qalma abaalmarinta Oo lacag ah loogu kordhiyo akoonkiisa si uu hadhaw ula bixi karo.
Meel kasta oo aad ku xidho faa'ido ama khasaare ama faa'ido ah 1 pip ama wax ka yar looma tirin doono haday ku xidhmaan tartanka Dhaqaaqa Dahabka. Shirkadu waxay daryeelaysaa xuquuqda ah inay cusboonaysiiso Qaybtan iyadoon wax ogaysiis hordhac ah lasiin macmiilka taasoo ay daruuri tahay in losoo celiyo.
Hadii shirkadu ka shakido ama ay hayso sabab sheegaysa in macmiilku si qaldan wax u isticmaalay ama isku dayay in uu si qaldan u isticmaalo shuruudaha tartanka Dhaqaaqa Dahabka ama bixin kasta oo ay soo jeediso shirkadu, ama u dhaqma si aan wanaagsanayn, shirkadu waxay ilaalinaysaa xuquuqda, xoriyada uu u leeyahay in uu wixiisa qabsado, inuu dafiro, diido inuu bixiyo, kala baxo ama dhamayn ka timaada macmiilka kujira tartanka Dhaqaaqa Dahabka iyo, hadii ay daruuri noqoto: (i) in la diido in labixiyo, lajoojiyo oo laga jaro akoonka(nada) macmiilka, (ii) in la joojiyo galitaanka adeegyada macmiilka ay siisay shirkadu iyo/ama in la dhameeyo heshiiskii ka dhexeeyay macmiilka iyo shirkada bixinta adeegyada (iii) in la xanibo akoonka(nada) macmiilka (si kasta ha ahaatee, xafidiisa halka kuwa kale looga baahanyahay awood la xidhiidha) iyo in habaynta dirista hadhaaga aan la isticmaalin, oo laga jaray xadiga tartanka Dhaqaaqa Dahabka si la mida ah faa'ido kasta oo shirkadu u aragto in lagu qaatay dhaqan aan wanaagsanayn, macmiilku. Waa muhiim in macaamiisha ku haboon ay ogaadaan in khatartodu aanay ku xadidnay xadiga lacagta ay dhigteen oo inay sameeyaan ganacsi u qalma waa suuro gal in ay lumiyaan lacag ka badan intay dhigteen. Cawaaqibka qaar, khasaaraha waxo loo tixgaliyaa bilaw kasta ama kushubashada ugu yar.
Shirkadu waxay ilaalinaysaa xuquuqda, xoriyada uu uleeyahay waxa uu qabanayo, in labadalo, waxkabdal ama kaabis lagu sameeyo ama la dhameeyo tartanka Dhaqaaqa Dahabka, ama dhinac kasta, wakhti kasta iyadoo aanay jirin waxa ogaysiis ah oo ka horeeya.
Copyright © 2021 SUUQYADA FXPRIMUS. Dhamaan Xuquuqaha la dhawray.